Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara - Wikipedia
Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara
Ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara (FAM) dia fikambanana na fiangonana natsangan'i Pasitera Mailhol André Christian Dieu Donné tamin'ny taona 1996. Mifototra manokana amin'ny fanazavana sy fampianarana ny misiterin'ny bokin'ny Apokalypsy ny fikambanana. Roa lahy tamin'ny voalohany ny mpianatra ary avy eo niitatra tamin'ny olona maro be manerana an'i Madagasikara. Ny hitory amin’ny olona rehetra maneran-tany ny Fanambaràn’i Jesosy Kristy voarakitra ao amin’ny Bokin’ny Apokalypsy no antom-pisian’ny FAM. Ny ampahafolon-karen’ny mpikambana no amatsiana vola ny hetsika sy ny asa rehetra karakarain’ny FAM. Rehefa niitatra any ivelan'i Madagasikara io fiangonana io dia niova anarana ka atsoina hoe Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany (FAM).
2 Fampianarana sy fanambaràna
3 Ny mpino ao amin'ny FAM
4 Ny fanompoam-pivavahana
I Mailhol André Christian Dieu Donné, dia mpino katôlika sady mpivarotra eny amin'ny sisin'arabe talohan'ny nanorenany ny fiangonany tamin'ny taona 1996. Nilaza izy fa nahazo ny antson' Andriamanitra tamin'ny taona 1991 izay nandefa azy ho iraka hitory ny Bokin'ny Apokalipsy. Raha mbola tsy pastora izy dia efa nanomboka nampianatra ny Bokin'ny Apokalypsy niaraka tanin’ny namany roa tamin’ny taona 1993. Nanomboka namoaka ny fampianarany tamina fampielezam-peo tsy miankina izy tao Antananarivo tamin’ny taona 1994. Nisy fotoana nitsaharan’izany fampianarana izany nefa nisy fotoana nitohizany koa. Nanomboka nanao vondrom-bavaka sy fianarana isan-kerinandro i Mailhol tao Antananarivo ka lasa fikambanana izany afaka iray taona. Niorina amin’izay ny Association des Etudiants du Livre Prophétique de la Bible tamin'ny nanaovana ordinasiona an'i Mailhol ho Pastera tamin’ny 31 Marsa taona 1996. Niova anarana izany ka lasa natao hoe Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara (FAM) tamin’ny taona 2003. Tsy nitsahatra ny fandefasana fandaharana am-pampielezam-peo isan-karazany sy amin’ny fahitalavitra. Niforona koa ny Radio Fanambaràna izay fampielezam-peon'ilay fikambanana. Efa misy any ampitan-dranomasina ny FAM.
Fampianarana sy fanambaràna[hanova | hanova ny fango]
Miavaka ity fiangonana ity amin'ny fanalana devoly amin'ny alalan'ny fanondrona amin'ny fanondro sy ny faminaniana navoakan'ny pasitera Mailhol: fialàn'ny prezida Ratsiraka teo amin'ny fitondrana, fiverenany teo amin'ny fitondrana, fametrahan'ny FFKM an-dRavalomanana eo amin'ny fitondrana, fanonganam-panjakana tamin'ny 2009, fitondrany ny fanjakana aorian'ny 2013, anisan'ny mampiavaka ny Fiangonana Apokalypsy ihany koa ny fanazavana momba ny andro nahafatesan'i Jesosy Kristy dia ny antsasaky ny herinandro (Alarobia) araka ny fanazavan'ny pasitera Mailhol.
Amin'ny ankapobeny dia hita ho manambatra ny fampianarana sasany avy amin'ny adventisma sy ny evanjelisma ny FAM.
Ny mpino ao amin'ny FAM[hanova | hanova ny fango]
Mitory teny amin'ireo tsy mbola kristiana ny FAM ka maro no voataona hiditra ao aminy. Maromaro ihany koa anefa ireo avy amin'ny "fiangonana zokiny" toy ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana protestanta tranainy izay voasarika ao. Izany dia vokatry ny hetahetan'ny mpino hahalala bebe kokoa ny Soratra Masina, indrindra ny Bokin'ny Apokalypsy sy ny tsiambaratelo fonosiny, izay tsy tena ahitam-panazavana firy ao amin'ireo fiangonana tranainy. Manana ny fanamiana mampiavaka azy ireo ny mpivavaka ao amin'ny FAM, dia ny fitafiana miloko manga sy fotsy.
Amin'ny andro Asabotsy (izay antsoiny hoe Sabata) no ivavahan'ny mpino ao amin'ny FAM. Misy ny vavaka sy ny fampianarana ary ny toriteny. Misy ny fanentanana amin'ny alalan'ny hira sy mozika ary ny dihy. Tanterahina koa ny fandoavana ny ampahafolon-karena izay tantazana amin'ny harona lehibe maromaro, sady anantenana ny firotsahan'ny fitahian' Andriamanitra, izay tsy andrasana aorian'ny fahafatesana any an-danitra fa mirotsaka ety an-tany; tsy an-tery anefa izany.
Site webn'ny Apokalypsy
Tranonkala hafa koa
http://www.apocalypse-mada.org Archived Oktobra 21, 2016 at the Wayback Machine
http://web-radio.apocalypse-mada.org Archived Oktobra 21, 2016 at the Wayback Machine
↑ Tantaran'ny FAM (jereo eto Archived Aogositra 31, 2018 at the Wayback Machine).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fikambanana_Apokalypsy_eto_Madagasikara&oldid=1019257"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 23:48 ity pejy ity.